Global Voices teny Malagasy » Arabia Saodita: Mandà Ny Fanaovana Fitsarana Tsy Atrehim-Bahoaka Ireo Mpitarika Reformista · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Septambra 2012 11:44 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Soliman Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Notanterahina ny 8 septambra ny fotoam-pitsarana fahatelo ireo mpitarika Saodiana malaza amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Miatrika vesatra ho manentana ny olona hanao hetsi-panoherana sy manohintohina ny fampandrosoana ny firenena i Mohammad al-Qahtani  sy i Abdullah al-Hamid , izay anisan'ny mpanorina ny Fikambanana Saodiana Miaro ny Zo Sivily Sy Politika . Nanapa-kevitra ny mpitsara nandritra ny fotoam-pitsarana teo aloha  fa tsy hatao ampahibemaso intsony ny fotoam-pitsarana manaraka, raha nanatrika ny fotoam-pitsarana ny reformista ampolony, izay isa mahatalanjona eo amin'ny tontolo politika saodiana.
@Maha1410 : Nanatona ny mpitsara ny Dr. al-Hamid, Dr. al-Qahtani, mpisolovava Abdulaziz al-Hussan  sy Atoa Fowzan al-Harbi . Tsy navela hiditra ny mpanatrika ary miandry eo amin'ny toera-piandrasana ry zareo.
@alajmi01 : nolazain'ny [Dr. al-Hamid] taminay fa mety tohizana mangina mikatom-baravarana ny fitsarana.
@fowzanm : Nikiry ny mpitsara Hamad al-Omar fa tsy atrehim-bahoaka ny fitsarana. Nanapa-kevitra ny handao ny fotoam-pitsarana ny Reformista mpiaro ny zon'olombelona.
Dr. al-Qahtani's niteny :
@fowzanm : Tonga ny fiarabe mitondra polisy raha nanomboka niala ny olona.
@fowzanm : Nilaza ry zareo fa roa tamin'ireo nitady hanatrika ny fitsarana no voasambotra […]
Navoaka izy roa ireo taoriana kely, rehefa nanasonia taratasy milaza fa tsy hijery ny fombafombam-pitsarana intsony .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/09/10/38121/
 Fikambanana Saodiana Miaro ny Zo Sivily Sy Politika: https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Civil_and_Political_Rights_Association
 ny fotoam-pitsarana teo aloha: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/09/08/37913/
 Abdulaziz al-Hussan: https://twitter.com/ahussan
 Fowzan al-Harbi: https://twitter.com/fowzanm
 tsy hijery ny fombafombam-pitsarana intsony: https://twitter.com/alajmi01/status/244356118921478145